कोरोना भाइरसको महामारीले निम्त्याएको यो अवस्थामा हामी जति जोखिम बढेको छ, त्यति नै सचेत बनेर अरू रोगको जोखिमबाट समेत जोगिनुपर्ने अवस्था छ ।
यो जटिल समयमा हामी शारीरिक र मानसिक रोगको समेत सम्भावित समस्याबाट जोगिनुपर्ने आवश्यकता छ । उच्च मनोबलसहित बाँचेको खण्डमा मात्रै हामीले कोरोनाको यो संकटलाई समाप्त गर्न सक्छौं ।आज हामीहरू धेरैलाई नजानी नजानी गाँज्ने एउटा रोग बनेको छ, डिप्रेसन । त्यही डिप्रेसन, जसलाई हामी विसाद वा अवसाद भन्ने गर्छाैं ।
डिप्रेसन भनेको सामान्य अवस्थामा मान्छेमा उत्पन्न हुने चिन्ता मात्रै होइन । यसको शिकार हुनको लागि दुई हप्ताभन्दा बढी बिनाकारण दिनभरि निराश, नरमाइलो र दिक्दार लागिरहने जस्ता विशिष्ट किसिमका लक्षणहरू छन् ।
जस अनुसार पहिलेपहिले आनन्द दिने कुराले पनि पछि झर्काे लाग्न थाल्नु, थोरै सक्रियतामा पनि धेरै थकानको महसुस हुनु र जाँच गर्दा थप केही पनि समस्या नदेखिनु नै डिप्रेसनको मुख्य समस्या हो ।
लगभग एकैपटक विश्वमा ४ प्रतिशत जति मान्छेलाई डिप्रेसनले गाँजेको हुन्छ । उनीहरू विभिन्न कारणले उपचारको पहुँचमा आउन सकिरहेका छैनन् । नेपालमा पनि उपचारको पहुँचमा पुग्न नसकेका मनोरोगीको संख्या धेरै छ । उनीहरू उपचारको पहुँचसम्म आउन नसक्नुको पछि पनि दुईवटा कारण रहेका छन् ।
एउटा त सबैतिर मानसिक सेवाको अभाव र रोगीलाई समाजले फरक ढंगले हेर्ने गरेका कारण पनि उनीहरू उपचारको पहुँचमा आउने गरेका छैनन् ।
मानसिक समस्याका लक्षण के–के हुन् ?
व्यक्तिमा दुई हप्ताभन्दा धेरै लगातार दिक्दारी लाग्नु, अनावश्यक थकानको महसुस हुनु आदि मानसिक समस्याका मुख्य लक्षण हुन् ।
भोक र निद्रामा गडबढी हुनु, आफ्नो भविष्य व्यर्थ छ म बाँच्नुको अर्थ छैन, म समाज र परिवारको लागि बोझ भएँ भन्नेजस्ता सोच पैदा हुनु पनि मानसिक समस्याको लक्षणभित्र पर्छ । मानसिक समस्याले थप च्याप्दै लग्यो भने त्यस्ता बिरामीहरूले आत्महत्याको प्रयाससमेत गर्ने गर्छन् ।
कडा खालको मानसिक रोगले गाँजेका व्यक्ति भने अस्वाभाविक व्यवहार देखाएर विक्षिप्तताको अवस्थामा पुग्छन् । तर यसको उपचार पनि छ ।
मानसिक समस्याको दुईवटा कारणहरू छन् । एउटा जैविक कारण हो भने अर्काे मनोवैज्ञानिक कारण ।
कुनै व्यक्तिमा डिप्रेसन छ भने उसको बच्चालाई पनि यस्तो रोगले छिटो समात्ने सम्भावना सामान्य मान्छेको तुलनामा धेरै हुने गर्छ । जैविक कारणअन्तर्गत नै हाम्रो मस्तिष्कको नसामा हुने सन्तुलनमा तलमाथि भयो भने यस्ता समस्या देखिन सक्छ ।
त्यस्तै, मनोवैज्ञानिक कारण अन्तर्गत व्यक्तिको सहन गर्ने क्षमता र वातावरणलाई हेर्ने हेराइ आदिले पनि मान्छे यस्तो समस्यामा पर्ने गर्छ । जस्तो कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मान्छेमा धेरै निराशा छाउने गर्छ । यसले पनि डिप्रेसनको शिकार बनाउन सक्छ । मनोरोगको सामाजिक कारण पनि हुने गर्छ । यो कारण आफ्नो बसोबासस्थलको वरपरको वातावरणले निर्धारण गर्ने गर्छ ।
मानसिक समस्याको उपचार पद्धति
यसको उपचार पद्धति पनि भिन्न भिन्न किसिमको हुने गर्छ । जसमध्ये एउटा भनेको साइकोथेरापी हो र दोस्रो औषधिको सेवन हो ।
सुरुवाती चरणमा रहेको मानसिक समस्यालाई साइकोथेरापीले नै समाधान गर्न सकिन्छ भने त्योभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेपछि यसको उपचारको लागि औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिको जीवनशैलीमा असर नपुर्‍याएको अवस्थामा साइकोथेरापीबाट व्यक्तिलाई पुरानो अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ । तर व्यक्तिको जीवनशैलीमा नै असर पर्न थाल्यो भने त्यसलाई मोड्रेट लेभलको जीवनशैली भनिन्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा भने हामीले औषधोपचारको सहारा लिनु जरुरी हुन्छ । सामान्यतया जटिल अवस्थाबाहेक अरू अवस्थामा केही महिनाको उपचार पाएमा मानसिक समस्या भएका व्यक्ति पूर्ण निको हुन्छन् । त्योभन्दा कडा खालको समस्या भएको छ भने बिरामीको लागि आवश्यक पोषण्, मनोपरामर्श र डिप्रेसनको औषधिसमेत एकैपटक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
डिप्रेसनबारे केही भ्रम
डिप्रेसन भनेको कमजोर मन भएकाहरुलाई हुन्छ भन्ने समाजमा एउटा भ्रम व्याप्त छ । तर कडा मन भएका र व्यक्ति पनि यसको शिकार भएको देख्न सकिन्छ । उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूमा समेत यस्तो समस्या देख्न सकिन्छ ।
कतिपयमा यो कुनै पूर्वजन्मको कारणले हुने समस्या भन्ने भ्रम रहेको देखिन्छ, जुन गलत हो ।
यसको औषधि एकपटक खाएपछि जीवनभरि खाइरहनुपर्छ भन्ने भ्रम पनि छ । यसले पनि धेरै उपचारको लागि आउने गर्दैनन् । तर केही वर्ष उपचार गरेपछि जति सुकै कडा मनोरोग भए पनि यो निको हुन्छ । जीवनभरि उपचार गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा भने सत्यता छैन ।
मानसिक रोगको औषधि प्रयोग गरेपछि मान्छेको दिमागलाई त्यसले बोधो बनाउँछ भन्ने भ्रम पनि छ, यो पनि सत्य होइन ।
हाम्रो जिम्मेवारी के हो ?
समाजमा मानसिक समस्याको जोखिम बढिरहँदा हाम्रो पनि यसमा जिम्मेवारी हुने गर्छ । सामान्य लक्षणहरूमात्रै पनि केही दिनसम्म देखियो भने त्यसको उपचार गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो नजिकको कसैले यस्तो लक्षण देखायो भने नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा वा मानसिक परामर्शदाता कहाँ पुर्‍याउनु सबैको दायित्व हो । साथै, यस्ता समस्या गम्भीर समस्या होइन भन्ने सबैलाई बुझाउनु पनि हामी सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो ।
कसरी बच्ने मानसिक समस्याबाट ?
हामी अहिले दिनदिनै कोरोना महामारीका कारण वाक्क भएका छौं । यस्तो अवस्थामा भ्रम पैदा गर्ने समाचारहरू पनि धेरै आउने गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा धेरै भ्रामक समाचार आउने गर्छन् । त्यसैले, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कम गरौं ।
कुनै पनि दीर्घरोगको औषधिलाई निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ । अहिले निषेधाज्ञाका कारण नियमित चिकित्सकसँग परामर्श लिन पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा घर वा आफ्नो ठाउँमा आफूलाई सक्रिय राखौं । आफ्ना प्रियजनसँग मनको भावनाहरू व्यक्त गर्ने गरौं । विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना परिवारहरूसँग सम्पर्कमा नै बसौं ।
अर्काे उपाय भनेको मादक पदार्थको सेवन कम गरौं । यस्तो व्यवहारले पनि डिप्रेसन निम्त्याउन सक्छ । यसका साथसाथै अर्काे महत्वपूर्ण काम भनेको आत्मबल बढाउनु हो । यो महामारी पनि सधैं रहनेवाला छैन । यस्तो अवस्थामा भोलिको समयमा यो समस्या रहँदैन भनेर आफ्नो आत्मबल बढाएर मानसिक समस्यालाई दूर गराउन सकिन्छ ।
डा. अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित कोरोना अपडेटको क्रममा दिएको अभिव्यक्ति
आत्महत्या रोक्न राष्ट्रिय रणनीति ल्याऔं : डा. ओझा
एसिड पीडितको जिम्मा सरकारले लियो, यी हुन् मन्त्रिपरिषदका ११ निर्णय
Categories Select Category Auto (343) Blog (3) English (839) Entertainment (469) Finance (799) Nepali (8,554) Sports (5,720) Tech (1,501) World (3,046)